Microsoft inogadzirira kuvhurwa kweThinga.Me kunyorera kutora uye kuronga zvinhu chaizvo | IPhone nhau
Microsoft inogadzirira kuvhurwa kweThinga.Me kunyorera kutora uye kuronga zvinhu chaizvo
Zvirokwazvo anopfuura mumwe wenyu ane muunganidzwa wemakomiki, manhamba, mafoni, maCD, maDVD, maposadhi, mota ... kuunganidzwa kwaunogara uine munzvimbo yakachengeteka kure nemaoko euyo chero munhu angave angave nenjodzi kuunganidzwa wedu wakakosha watakatora makore mazhinji kupedzisa.
Microsoft Yekuongorora Laborator inoshanda nguva dzose mune zvekuda kunyorera izvo zvisingawanzo kuona mwenje. Pakutanga, Microsoft yakatanga chirongwa chakabvumidza vashandisi kutora ganda reiyo maSelfie ayo vashandisi vaigona kutora kuburikidza nechishandiso. Panguva ino kunyorera kuri kuda kusiya murabhoritari yeMicrosoft kunonzi Thinga.Me, iko kunyorera inotibvumidza kutora zvinhu uye kuzvirongedza.
Iko kunyorera kunotibvumidza isu kutora mifananidzo yezvinhu zvese zviri muzvikamu zvedu ku pwozozvironga mukati mekushandisa. Iko kushandisa kunoshandisa iyo "GrabCut" kodhi yakagadzirwa neMicrosoft Research kuti ione nekuparadzanisa zvinhu zvese mumifananidzo yatinotora, ichisiya chete lens yekuunganidza.
Hupenyu hwedu hwakazara nezvinhu zvepanyama zvinotifadza… Seboka, takagumbuka kuti hapana chikumbiro chakadzikama chinotibvumidza kuti tigadzire zvinhu zvepanyama izvi kuti tikwanise kuronga nekuzvigovana neshamwari dzedu kana vatinozivana navo.
Thinga.Me yakagadzirirwa kuzadza ichi chisina. Yedu mantra yeapp ndeye "Unganidza zvinhu, kwete mapikicha." Inoshandisa GrabCut, chidimbu chekodhi chakagadzirwa neMicrosoft Research makore angangoita gumi apfuura, izvo zvinotibvumidza kubvisa zvese zvakabatwa, tichisiya chete chinhu chiri mubvunzo. Ichi chiito chakareruka chekubvisa kumashure kwechinhu chinotipa kunzwa kwekuti haisi mufananidzo wekutora, asi pachinhu chiri chemuviri. Nenharaunda ino yekutanga isu takawedzera mamiriro ekuisa pane edu ese maunganidzwa.
Kana iwe uchida kuyedza iyi Microsoft application, unogona kumira ne chinotevera chinongedzo uye kusaina kana izvo zvisina kunonoka zvakadaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Microsoft inogadzirira kuvhurwa kweThinga.Me kunyorera kutora uye kuronga zvinhu chaizvo
Apple inoda vatengesi vayo kuti vadzikise mitengo yeiyo iPhone 7
Apple inoburitsa yechishanu beta yeIOS 9.3.3